Ma jiro caymis toos ah oo loogu talagalay AJ Bell Tour Women 2021 - dieselboss
Ma jiro caymis toos ah oo loogu talagalay AJ Bell Tour Women 2021
Dalxiiska Haweenka ee AJ Bell ayaa ku dhawaaqay in tartanka 2021-ka aan si toos ah loo baahin doonin. Qabanqaabiyaasha ayaa ku sababeeyay xaqiiqada ganacsiga sababta ay u balaadhin waayeen tebinta dhacdada toddobaadka dheer, taasoo dhici doonta horraanta bisha soo socota.
Bandhig faneedka bilaashka ah ayaa habeen walba lagu muujiyaa ITV4 ee Great Britain ka dibna si caalami ah ayaa loo qaybiyaa Eurosport GCN. Dalxiiska Haweenka ayaa shaaca ka qaaday in ay soo galin doonan baraha bulshada iyo mareegaha ay ku leeyihiin baraha bulshada si ay ula socodsiiyaan taageereyaasha.
Qabanqaabiyaasha ayaa yiri: ‘Labadii sano ee la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwo aad u adag qabanqaabiyaha tartanka ahaan, gaar ahaan maadaama uusan jirin dalxiis haween ah 28 bilood gudahood. Tani waxay ahayd markii ugu adkeyd ee jiritaanka tartanka waxayna soo saartay caqabado ka sii weyn markii aan …
Entrada anteriorAnterior ▷▷ 2021 ▷ La fortuna de Eddie Van Halen
Entrada siguienteSiguiente Sable – Requisitespara1.com